သူမကို နေ့စဉ် TVမှာမြင်တွေ့ရတော့မဲ့ အကြောင်းလေးကို ပရိသတ်တွေသိအောင် ပြောပြလာတဲ့ ယဉ်လတ် – Cele Posts
သူမကို နေ့စဉ် TVမှာမြင်တွေ့ရတော့မဲ့ အကြောင်းလေးကို ပရိသတ်တွေသိအောင် ပြောပြလာတဲ့ ယဉ်လတ်
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ် ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါ တယ်နော်။ နွေဦးတော်လှန်ရေး မှာလည်း လုံးဝမပါဝင်ပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပရိသတ်တွေ ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်နေပါပစေ လုံးဝကို မတုံ့ပြန်ပဲအေးဆေးစွာနဲ့နေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ယဉ်လတ်ဟာ ဆိုရင် စစ်တပ်ထောက်ခံသူ အနေနဲ့တင် မဟုတ်ဘဲ MWD ချန်နယ် အတွက် အစီအစဉ်တစ်ခု ရိုက်ကူးထားပါသေးတယ်နော်။ သူတင်တဲ့ပုံတွေ အောက်မှာလည်း ပရိသတ်တွေက ဝိုင်းပြီး ပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေပါပစေ ယဉ်လတ်ကတော့ လုံးဝကို ဂရုမစိုက် ပါဘူးတဲ့နော်။
”မကြာခင်ရက်ိပိုင်းတုန်း ကတော့ သူမက ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ခံစားနေရသမျှကို သူမရဲ့ ချစ်သူကို ရင်ဖွင့်နေရတယ်ဆိုပြီး ရေးတင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမ က ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာထက်မှာ ပျောက်နေပြီး Tiktok မှာပဲ ပျော်ပါးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှတော့ တပ်ချစ်သူ ယဉ်လတ်က”သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် MWD Channel မှာသတင်းအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ရိုက်ကူးရေး ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပုံလေးတွဲပြီး တင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်. .. သူမ တင်ထားတဲ့ ပုံလေးအောက်မှာတော့ သူမကို အားပေးစကားတစ်ချို့နဲ့အတူ တစ်ချို့ကတော့‌ဝေဖန်မှုတစ်ချို့ကိုလည်း ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ယဉ်လတ်အတွက် အားပေးစကားလေး တစ်ခုခုလောက်ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်…
သူမကို နစေ့ဉျ TVမှာမွငျတှရေ့တော့မဲ့ အကွောငျးလေးကို ပရိသတျတှသေိအောငျ ပွောပွလာတဲ့ ယဉျလတျ
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ ယဉျလတျ ကိုတော့ အားလုံးသိကွမယျ ထငျပါ တယျနျော။ နှဦေးတျောလှနျရေး မှာလညျး လုံးဝမပါဝငျပဲ ရငေုံနှုတျပိတျနခေဲ့ တာပဲဖွဈပါတယျနျော။ပရိသတျတှေ ဘယျလိုပဲ ဝဖေနျနပေါပစေ လုံးဝကို မတုံ့ပွနျပဲအေးဆေးစှာနဲ့နနေတောပဲဖွဈပါတယျနျော။
ယဉျလတျဟာ ဆိုရငျ စဈတပျထောကျခံသူ အနနေဲ့တငျ မဟုတျဘဲ MWD ခနျြနယျ အတှကျ အစီအစဉျတဈခု ရိုကျကူးထားပါသေးတယျနျော။ သူတငျတဲ့ပုံတှေ အောကျမှာလညျး ပရိသတျတှကေ ဝိုငျးပွီး ပွောထားကွတာလညျး တှရေ့ပါတယျနျော။ ဘယျသူတှေ ဘယျလိုပဲ ပွောနပေါပစေ ယဉျလတျကတော့ လုံးဝကို ဂရုမစိုကျ ပါဘူးတဲ့နျော။
”မကွာခငျရကျိပိုငျးတုနျး ကတော့ သူမက ပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျ တိုကျခိုကျမှုတှကွေောငျ့ ခံစားနရေသမြှကို သူမရဲ့ ခဈြသူကို ရငျဖှငျ့နရေတယျဆိုပွီး ရေးတငျလာပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ သူမ က ဖဘေု့တျစာမကျြနှာထကျမှာ ပြောကျနပွေီး Tiktok မှာပဲ ပြျောပါးနတော ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့တော့ တပျခဈြသူ ယဉျလတျက”သူမကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ MWD Channel မှာသတငျးအစီအစဉျတငျဆကျသူ ရိုကျကူးရေး ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပုံလေးတှဲပွီး တငျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ. .. သူမ တငျထားတဲ့ ပုံလေးအောကျမှာတော့ သူမကို အားပေးစကားတဈခြို့နဲ့အတူ တဈခြို့ကတော့‌ဝဖေနျမှုတဈခြို့ကိုလညျး ရေးသားလာခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ယဉျလတျအတှကျ အားပေးစကားလေး တဈခုခုလောကျရေးပေးသှားကွပါအုံးနျော…
ပြည်ပမှာ မိဝေးဖဝေး တစ်ယောက်တည်း လာနေရတဲ့ ချွေးမလေးကို မွေးနေ့မှာ ပျော်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ချမ်းချမ်းရဲ့ယောက္ခမ